Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Jarmalka iyo jaaliyadda Sacuudiga oo Canbaareeyay Falkii Foosha Xumaa ee Guriceel
Jaaliyada Jarmalka iyo jaaliyadda Sacuudiga oo Canbaareeyay Falkii Foosha Xumaa ee Guriceel
Posted by ONA Admin	/ February 15, 2014
Jaaliyda Somalida Ogadenia ee Jarmalka ayaa canbarayay maamulka lamagac baxay Ahlusuna Waljameemaca (ahlu shar) ee ka arimiya bartamaha Somaliya taariikhdu markay ahayd 7/2/2014 magaalada Guriceel ee gobolka galgaduud ka qabtay 3ex N/hure oo ka tirsanaa CWXO oo u dhiibay gumaysiga Itoobiya. Sadexdan muwaadin oo uu kamid aha Sh. Muxumed Cabdulahi (muxumed anni).
Waxaa falkan foosha xun qirtay inuu ka danbeeyeen gudoomiyha degmada Guriceel Cismaan Ciise Nuur (taar-dhuleed) oo waraysi uu siiyay idacda VOA da ku sheegay inuu ka masuul ka yahay falkaa. Ma,aha markii ugu haraysay oo ay fal noocan oo kala ah sameeyan maamulku sheega ka jira Somaliya kuwaas oo ay Itoobiya u samaysatay inay u noqdaan hangool ay dadka Somaliyed u adeegsato.
Arinkan oo an ahyn xaajo ugub ah sida ay dhaqanka ka dhigteen maamulada Waqooyi Galbeed, Waqooyi Bari, Jabuuti iyo kuwan oo hada iyaguna ku soo biiray wadadii dhiidhiga ahayd, taasoo ay rali galin kaga radianayaan Itoobiya.
Waxay jaliyada Somalida Ogadenya ee Jermalka ugu baaqayaan umadda Somaliyeed meel ay joogaanba inay cambaareeyaan maamulada u adeega gumaysiga Itobiya oo ah cadawga 1aad ee umadda Somaliyeed. Waxay jaaliyadda ugu baaqayaan haya’daha xuquuqul-insanka wadamada xorta ah, saxaafada madaxa banaan, Midowga Africa, Midawga Yurub in ay canbareyaan falkan foosha xun, ee kabaxsan xuquuqda adamaha ee lagu hayo shacabka Somaliyeed ee Ogadenya.
Maamulka Jaaliyadda S.Ogadenya ee Jermalka
Waxaa kaloo shir isugu yimid shalay oo taariikhdu ahayd 14/2/2014 jaaliyad S.Ogaadeen ee Sacuudiga farac Jiddah shirkaa oo sidii dhaqanka u ahayd jaaliyadaha lagu furay aayada quraan ah iyo wacdi diiniya. Furitaankaa ka dib waxaa lagu soo dhoweeyay isuduwaha jaaliyadaha Bariga Dhexe mudane C/lahi Axmed [ciraaqi], oo warbixin waafi ah ka siiyay jaaliyadda meesha uu marayo halganka xaqa ah ee lagu xoreeynaayo dalka Ogaadeeniya ee JWXO ay hormuudka ka tahay gude iyo dibadba. Wuxuu isu-duwaha aad ugu dheeraaday waxa looga baahan yahay jaaliyadda iyo doorka ay ku leeyihiin halganka ka socda dibadda isagoo ku booriyay in loo hiiliyo dadka shacabka ah ee Ogaadeenya ku nool ee cadowga gumeeysiga ah iyo dabadhilfku ay dhibaatada ku hayaan. Waxaa kaloo uu ugadigay in lala socodo oo laga feejinaado shirqoolada gumeeysiga iyo dabodhilifka oo la’is garabtaago halganka hiiliyo hooba.
Waxay jaaliyada go’aamisay inay ilaaliyaan midnimada, waxayna amaan usoo jeediyeen ciidan ka JWXO ee maalin iyo habeenba u taagan sidii ciida hooyo looga xoreenlahaa gumeeysiga. Waxay sidookale amaan usoo jeediyeen jaaliyadaha S.Ogaadeeniya ee hiilka iyo hooba lagarab taagan halganka.
Waxaay jaaliyadu cabaaraynaasaa falalka argagixisada ah ee lagula kacayo muwaadiinta S.Ogaadeeniya iyo xasooqa lagu hayo dadka riyadka ah een wax danbiya aan galabsan ee ciidamada gumeeysugu xasuuqayaan.
Gabagabadii waxaa lagu balamay sidii loo dardar galin lahaa la dagaalanaka gumeeysiga.